ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd.
Rattan Floor မီးအိမ်
Xinsanxing Lighting Company ကို Huizhou Zhongkai National High-tech Zone တွင် 2007 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝပစ္စည်းအလင်းရောင်အတွက် အထူးပြုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
တည်ထောင်ခြင်းအစတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အရိပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး အိမ်တွင်းအိမ်တွင်းအလင်းရောင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် 2015 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။2019 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်၏ "စိမ်းလန်းသောရေနှင့် စိမ်းလန်းသောတောင်တန်းသည် ရွှေငွေတောင်" ဟူသော အယူအဆကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သဘောတရားအရ ဝါး၊ ကြိမ်ကဲ့သို့သော သဘာဝပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေးကို အဓိကထား၍ ထုတ်ကုန်ဦးတည်ချက်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်လာစေရန်၊ သစ်၊ မြက်၊ လျှော်ပင်၊ စသည်တို့။
၃ နှစ်ကြာ စူးစမ်းလေ့လာပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စက်ရုံသည် မြောက်အမေရိက၊ ဥရောပ၊ အာဖရိကနှင့် အာရှနိုင်ငံအချို့သို့ တင်ပို့သည့် သဘာဝပစ္စည်း အလင်းရောင် ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားများစွာကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးတွင် ပြည်ပမှ ဖောက်သည်များ၏ တညီတညွတ်တည်း ချီးမွမ်းခြင်းကို ရရှိခဲ့သည်။10 နှစ်ကျော် တည်ငြိမ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အချို့သော ပင်မ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်အောင် ကူညီပေးပါသည်။
Xinsanxing သည် အရည်အသွေး၏ အရေးကြီးပုံကို နားလည်သည်။ကုမ္ပဏီသည် BSCI၊ ISO9001၊ Sedex၊ EU CE နှင့် အခြားသော certifications.amfori ID:156-025811-000 ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီမစ်ရှင်- စာအိတ်ကို တွန်းပို့ကာ လမ်းကို ဦးဆောင်သည်။
ကုမ္ပဏီ မျှော်မှန်းချက်- အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာ၏ ထောင့်တိုင်းတွင် လင်းစေပါစေ။
Company Tenet- အရည်အသွေးသည် ဖောက်သည်များကို အနိုင်ယူသည်၊ သမာဓိသည် စျေးကွက်ကို အနိုင်ယူသည်။
[စရိုက်]- သမာဓိနှင့် ရိုးသားမှု၊ မိမိကိုယ်ကို စည်းကမ်းရှိမှုနှင့် လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း။
[တာဝန်ယူမှု]： ငါ့လက်ဖြင့် အလုံးစုံ ပြီးမြောက်လိမ့်မည်။အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း။
[Pragmatic]- လက်တွေ့ကျသော၊ တင်းကျပ်ပြီး ထိရောက်မှု၊အကြောင်းပြချက်တွေ မပေးဘဲ နည်းလမ်းရှာပြီး အဆိုပြုနေသမျှ မညည်းညူပါနဲ့။
[စိတ်အားထက်သန်မှု]- အလုပ်ဝါသနာပါသူ၊ အခက်အခဲများကို စိန်ခေါ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို တိုးတက်စေခြင်း။
[အပြင်]- သင်ယူမှု၊ မျှဝေမှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၊မိမိကိုယ်ကို ကျော်လွန်၍ အကောင်းဆုံးမဟုတ်၊ သာ၍ကောင်း၏။
ခေတ်မီအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းတွင် အလင်းရောင်သည် လူတို့၏ဘဝလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရုံသာမက အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို အနုပညာဆန်စွာ ပြုပြင်ဖန်တီးရန်၊ အိမ်တွင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို လှပစေရန်၊ အာကာသအကျိုးသက်ရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည် လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ပိုရလာနေတဲ့ လေထုနဲ့ ခံစားချက်။ကွဲပြားသောစျေးကွက်ဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ခေတ်မီအသေးစား၊ အမေရိကန်ခေတ်မီနှင့် သဘာဝအနုပညာကဲ့သို့သော ကွဲပြားသောအလင်းရောင်ထုတ်ကုန်များ၏ပုံစံများကို ဖန်တီးရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ဥရောပ၊ အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အာဖရိကနှင့် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသများသို့ တင်ပို့ရောင်းချလျက်ရှိပြီး ဆန်းသစ်ပြီး ကွဲပြားသောပုံစံများ၊ ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပြည်ပမှဖောက်သည်များ၏ ထောက်ခံမှုနှင့် ကတိကဝတ်များကို ရရှိထားသည်။
Xinsanxing သည် ရိုးရာအလင်းရောင်အတွက် အဆင့်မြင့်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကတိပြုပါသည်။ကုမ္ပဏီသည် 1600 စတုရန်းမီတာ ကျယ်ဝန်းပြီး လွတ်လပ်သော ထုတ်လုပ်မှုနှင့် တပ်ဆင်စက်ရုံ၊ ဝန်ထမ်းပေါင်း 100 ကျော်ဖြင့် အိမ်တွင်းအလင်းရောင်၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်မီးများ၊ ဆိုလာမီးများ၊ ပန်းခြံမီးများ၊ ပြင်ပအလင်းရောင်များ၊ သဘာဝပစ္စည်းများ ယက်လုပ်ထားသော မီးလုံးများကို ပြီးပြည့်စုံသော ထုတ်ကုန်လိုင်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ .
1. OEM / ODM လက်ခံသည်၊ ဖောက်သည်များ၏ အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်။
3. အရည်အသွေးမြင့်, ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း, အမြန်ပေးပို့, အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု, ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှု
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့် သင်၏စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကို 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပါမည်။
5. သင်၏မေးမြန်းမှုအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျင်စွာဖြေဆိုရန် ကျွမ်းကျင်ပြီး အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းများ
6. ဆယ်နှစ်အထက် အတွေ့အကြုံရှိသော အဆင့်မြင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လူတစ်စု။
7. ကျွန်ုပ်တို့၏အချောထည်မီးလုံးများ၏ 100% ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ QC ဝန်ထမ်းများမှ မပို့ဆောင်မီ စမ်းသပ်မည်ဖြစ်သည်။
မီးအလှဆင်ခြင်းအတွက် အကြံဉာဏ်သစ်များကို ပြောပြပေးပါ။
စိမ်းလန်းသောအလင်းရောင်ကို ဦးဆောင်ရန် သဘာဝအနုပညာ မီးချောင်းများ
အမှတ် 44၊ Jiazi စက်မှုနယ်မြေ၊ Chenjiang ခရိုင်၊ Zhongkai Hi-Tech Zone၊ Huizhou၊ Guangdong၊ China